रोब जोम्बीको 'द मुन्स्टर्स' अन्ततः राक्षसी रूपमा रमाइलो टिजर हुन्छ
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	रोब जोम्बीको 'द मुन्स्टर्स' अन्ततः राक्षसी रूपमा रमाइलो टिजर हुन्छ
अझै पनि हाम्रो मुन्स्टर मायालु हृदय बन्नुहोस्
by ट्रे हिल्बर्न III जुन 8, 2022
by ट्रे हिल्बर्न III जुन 8, 2022 42,710 हेराइहरू
हामीले रोब जोम्बीको रिपोर्ट गर्दैछौं मुन्स्टरहरू अहिलेको लागि राम्रो समाचार। प्रत्येक हप्ता, निर्देशकले फिल्मको कलाकार थप्ने, स्थानहरू, मेकअप र वार्डरोबको अपडेट दिइरहेका छन्। प्रत्येक खुलासा एक अद्भुत स्वागत गरिएको छ। गहिरो कट जोम्बो र अंकल गिल्बर्ट जस्ता पात्रहरूको थपले हामीलाई साँच्चै उत्साहित बनाएको थियो। अन्ततः वास्तविक टिजर ट्रेलर हेर्ने समय आएको छ मुन्स्टरहरू र हामी यसको बारेमा धेरै उत्साहित छौं।
यस फिल्मको बारेमा सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य यो थियो कि यो PG रेटिङ हुन गइरहेको थियो। त्यो ज़ोम्बीको नियमित भाडाबाट ठूलो प्रस्थान हो १,००० शवहरूको घर लाई 31 र बाहिर। तर, मुन्स्टरहरू धेरै फरक अनुभवको प्रतिज्ञा गर्नुभयो र हामी अन्ततः त्यो किन हो भनेर देख्न सक्छौं। यो दुबै जोम्बी हो र होइन। यसले निश्चित रूपमा पुरानो टेलिभिजन शृङ्खलाहरूप्रति निर्देशकको प्रेम र सामान्य रूपमा पुरानो टेलिभिजन हेर्ने भावना देखाउँछ। तर, यसले धेरै जोम्बीका फिल्महरू र पात्रहरूलाई भर्ने ठूलो गोरख र उथलपुथल ल्याइरहेको छैन।
हामी निश्चित रूपमा Zombie को थप हेर्न उत्साहित छौं मुन्स्टरहरू! हामी पूर्ण ट्रेलरको लागि पर्खिरहेका छौं, तर मुख्य रूपमा हामी यसलाई थिएटरहरूमा हेर्नको लागि तत्पर छौं!
तपाईंले Zombie's को बारेमा के सोच्नुभयो मुन्स्टरहरू?